सुकुम्वासी सूचीबाट नाम नहटेका नेकपाका दुई भीआइपी ! «
सुकुम्वासी सूचीबाट नाम नहटेका नेकपाका दुई भीआइपी !
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १९:३७
गएको बैशाख २३ मा पक्ष, विपक्ष सबै सरकारको नीति र कार्यक्रममा आफनो धारणा व्यक्त गरिरहेका थिए भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल चाहिँ बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिद विक्री प्रकरणमा आफुलाई सकेसम्म चोखो देखाउने प्रयासमा नै धेरैसमय खर्चिरहेका पाइए । उनले त्यसदिन धेरैपटक दोहोर्‍याए –दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छु । उनको भनाइ थियो ‘ललिता निवासको सरकारी जग्गा कब्जामा संलग्न दोषीलाई कारबाही होस्, म पनि कारबाही भोग्न तयार छु । दोषी ठहर भए तोकिएको सजाय व्यहोर्न तयार छु ।’
जो व्यक्ति यतिठूलो सम्पत्तीका मालिक भए उनले आफुलाई किन सुकुम्वासीको हैसियतबाट हटाउन खोजेनन् भन्ने प्रश्न मात्रै उठाउन खोजिएको हो जसले गम्भीर संकेत गर्छन । यतिखेर नेकपाको सरकार छ । त्यसले विगतको जस्तै सुकुम्वासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने योजना घोषणानै गरिसकेको छ । त्यस्तो बेला सरकार संग रहेको यस्तो अभिलेखले उनी ‘अटोमेटिक’ रुपमा फेरी सुकम्वासी भएर जमिन प्राप्त गर्ने सुरमा त छैनन ? आफुलाई दुइतिहाइको भनी चिनाउने सत्तारुढ दलका महासचिव, विगतमा तीनपटक मन्त्री समेत भैसका यस्ता भीआइपीका बारे यस्तो प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थानै दुःखलाग्दो हुनु पर्छ ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ०५१ मा बनेको सरकारले बनाएको ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले यिनै पौडेललाइ उनका छोराका नाममा सुकुम्वासी जमिन उपलव्ध गरायो । त्यसबेला सुकुमबासीको पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न देशभर आयोगका जिल्ला समिति विस्तार भए । त्यहीमध्ये रूपन्देहीमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ (हाल प्रदेश ५ सभासद्) को अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको यो आयोगले पौडेल लगायतले बसोबास गरिरहेको दीपनगरको जग्गाको कित्ताकाट गरी १९ असोज ०५२ मा ‘अव्यवस्थित बसोबासीको प्रयोजनका लागि’ जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता दियो । कित्ता नम्बर २९ मा १५ धुर र कित्ता नम्बर ६४ मा ३ धुर गरी १८ धुर जग्गापुर्जा पौडेलले एक मात्र छोरा नवीनको नाममा लिए । छोराको नाममा लालपुर्जा लिएपछि पौडेलले त्यहाँ ९–९ पिलरको एकतले पक्की घर बनाएका थिए । माटाकोटहरोबाट पक्कीघरमा यसरी रुपान्तरित भयो पौडेल परिवार राज्यको सुकुम्वासी अभिलेखमा चढेर ।
तत्कालीन समयमा भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत र हाल सेवा निवृत्त एक सरकारी अधिकारीका भनाइमा ‘विवरण नखुलाइएका ती व्यक्तिहरू पार्टी कार्यकर्ता थिए’ (हिमाल खवर)। नाम जे दिइयोस् उल्लेखित ५८ हजार ३४० परिवार सुकिम्वासीकै हैसियतबाट जगापाएका वा लिएका थिए जो यी भिइपी पनि त्यही संख्यामा परे भन्नेमा शंका नहोला ।